Soo dejisan MakeMKV 1.15.4 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariCD & DVD-ga ripperMakeMKV
Bogga rasmiga ah: MakeMKV
MakeMKV – fudud ah si ay u isticmaalaan software si loogu badalo content ee DVD iyo disc Blu-ray si format MKV. software The baaritaanku content ee disc iyo bandhigayaa liiska faylasha helin qaab beddelidda dheeraad ah. dukaamada MakeMKV metadata kasta, qaybaha macluumaadka, audio iyo video tareenka ee disc a. software The iska dhega xadaynnada gobolka iyo marayaa ilaalinta nidaamka nuqul ka kooban saxanno ah. MakeMKV leeyahay interface sahlan oo dareen leh.
Taageerada DVD iyo Blu-ray saxanno
Ilaaliyaa audio iyo video ah kuwan raadkaygay
Ilaaliyaa metadata ah
Iska dhega nidaamka ilaalinta disc ah
Soo dejisan MakeMKV
Faallo ku saabsan MakeMKV
MakeMKV Xirfadaha la xiriira
DVDFab – waa barnaamij lagu duubo DVD-yada iyada oo aan tayo la lumin. Sidoo kale, softiweerka waxaa ku jira aalado lagu cadaadiyo, tirtirayo oo loo beddelo nuxurka wadista.
DVD Shrink – software ayaa loogu talagalay in lagu abuuro gurmad DVD-ga ah. Sidookale, softiweerku wuxuu taageeraa aaladaha khaaska ah ee lagu duubi karo faylalka ilaalintiisa ah.
Emsisoft Anti-Malware – fayras-ka-hortagga ayaa taageera tikniyoolajiyadda casriga ah ee ilaalinta webka wuxuuna baabi’iyaa barnaamijyada aan loo baahnayn wuxuuna xannibaadaa kombuyuutarka.